Kusize ILANGA ngesidumbu - Ilanga News
Home Izindaba Kusize ILANGA ngesidumbu
Kusize ILANGA ngesidumbu
Umndeni ubusucele usizo nakwiMeya yeTheku
KULAMULE ukungenelela kweLANGA odabeni obeseluzanywe nayiMeya yeTheku, uMnu Mxolisi Kaunda, lokusiza umndeni wakwaMtolo, kwa-A, eMlazi, okuthiwa besekuphele isikhathi esingaphezu kwenyanga isidumbu selungu lawo siduve emakhazeni kahulumeni akuMagwaza Maphala (Gale Street), eThekwini.
UNkz Thobeka Mtolo (29), ongudadewabo kamufi uMnu Thabani Mtolo (22) (osesithombeni), uthe isidumbu somfowabo sitholwe emfuleni iMfongosi – ohlukanisa isigceme sakwa-A nesakwa-E eMlazi – mhla ka-16 kuMandulo (September) emuva koku-nyamalala amasonto amabili. Umndeni uvule icala emaphoyiseni.
Udadewabo kamufi utshele ILANGA ukuthi ngobo-04h00 mhla ka-2 kuMandulo, kwafika owesilisa owayehlala endaweni wacela umfowabo, ethi kukhona abambizayo ngaphandle. Uthi bagcina ukumbona ngalolo suku. Uthi isidumbu satholakala sinenxeba esiphongweni, izandla zakhe ziboshwe ngentambo yamateki akhe ayengasawagqokile.
Uthi mhla ka-21 kuMandulo kwenziwe ulibofuzo ngezinsalela ezithathwe emazinyweni kamufi ukuze kuzoba nesiqiniseko sokuthi ngumfowabo ngempela.
“Sekuphele isikhathi esingaphezu kwenyanga isidumbu somfowethu siduve kula makhaza. Angazi ukuthi kungani kuze kwenziwe ulibofuzo ngoba siwumndeni sikwazile ukusihlonza. Ngokubona ukuthi sesiside isikhathi isidumbu singadedelwe, nginqume ukubikela iMeya yeThuku, uMnu Kaunda mayelana nokuhlukumezeka kwethu. Ngiyitshele ukusuka nokuhlala kwalolu daba. Ithinte amahhovisi ezempilo eThekwini yanxusa ukuba bacele udokotela obehlola isidumbu ukuba asidedele ngoba umndeni ukwazile ukusihlonza.
“Uthembise ukuthi uma lishona elayizolo ngo-Lwesithathu, isidumbu sizobe sesisitholile, kodwa udokotela uyenqaba naso, uthi ulinde imiphumela evela ePretoria,” kusho uNkz Mtolo.
Uthi kusukela ekuseni izolo ngoLwesithathu ubeqhinqile emakhazeni, ethi uzohamba uma sekudedelwe isidumbu somfowabo.
“Njengoba imeya ibisithembise ukuthi lizoshona elayizolo isidumbu sesisitholile, ngitshele amanye amalungu omndeni ukuthi umngcwabo uzoba ngeSonto, futhi nezibani ziyakhanya kuyimanje,” kubalisa yena.
Utshele ILANGA ukuthi bafuna ukufihla ithambo labo ukuze bezokwazi ukuqhubeka nempilo.
Okhulumela iMeya yeTheku, uMnu Mluleki Mtungwa, uthe amakhaza angaphansi komnyango wezempilo, umasipala ngeke ukwazi ukuphawula ngalolu daba.
Emuva kokuba leli phephandaba lishayele umnyango ngalolu daba, kuphele amahora ambalwa kwabuya impendulo ngomlomo womkhulumeli wawo, uNkk Noluthando Nkosi, othe: “Umnyango uyaxolisa ngokulinda komndeni isikhathi eside ngesikhathi kusaxazululwa lolu daba. Ngenxa yokuthi isidumbu satholakala singasabonakali kahle ukuthi ngesikabani, kwahanjiswa izicubu ukuze kwenziwe ulibofuzo.
“Noma kuthatha isikhathi lokhu, kubalulekile ukuze kube nesiqiniseko sokuthi isidumbu yisona ngempela yini. Isigcine itholakele incwadi ephuma emaphoyiseni egunyaza ukuba isidumbu sidede-lwe. Kulindeleke ukuba isayinwe kusasa. Umndeni uyanxuswa ukuba uxhumane namakhaza kahulumeni athintekayo ukuze lolu daba lufike esiphe-thweni, ukwazi ukufihla ilungu lawo.”
Okhulumela amaphoyisa aKwaZulu-Natal, uCo-lonel Thembeka Mbhele, uthe likhona idokodo eliphenywa ngamaphoyisa aseMlazi mayelana nokutholakala kwesidumbu.
Previous articleUMSHAYELI OVELELE UJABULE NGENDONDO
Next articleKuzoqiniswa isitilobho kumaCrown